Bogga ugu weynShuruudaha gaarsiinta
Waqtiyada dirida, wax walba waa hagaagsan yihiin!
Macluumaadka la cusbooneysiiyay Talaadada Nofeembar 26, 2020 markay tahay 7:00 a.m.
Dhowr usbuuc, Coronavirus wuxuu ruxay nolosheena wuxuuna ka codsaday qof walba inuu la qabsado si wax ku ool ah loola dagaallamo cudurkan.
Waa tan macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan gudbinta xirmooyinkaaga. In kasta oo amarro badani ay jiraan, haddana waxaan la qabsannay kooxaheena iyo qaababkayaga shaqo, dalbo waqtiyada diyaarinta waa caadi oo dhakhso badan. Ku saabsan rarka xirmooyinkaaga:
Gelinta guriga Colissimo : 48 ilaa 72 saacadood oo daahitaan ah oo la filayo in la keeno (gaarsiintu kama furna koodhadhka boostada qaarkood). Waxaad heleysaa SMS ama emayl si laguu ogeysiiyo maalinta iyo waqtiga dhalmada.
Gaarsiinta dhibcaha gudbinta: laga bilaabo 4 ilaa 8 maalmood oo daahitaan ah si loo odorosiyo gaarsiinta gudbinta. U hubso inaad ixtiraamto tilmaamaha caqabadda markaad soo qaadanayso xirmada si aad u ilaaliso naftaada iyo ganacsadaha ku siin doona xirmadaada. Waxaad heleysaa SMS ama emayl si laguu ogeysiiyo maalinta aad ka soo qaadan karto xirmadaada.
Bixinta Chronopost (shop2shop) (marka laga reebo Corsica iyo DOM TOM): dib u dhac ku dhow 4 maalmood. U hubso inaad ixtiraamto tilmaamaha caqabadda markaad soo qaadanayso xirmada si aad u ilaaliso naftaada iyo ganacsadaha ku siin doona xirmadaada. Waxaad heleysaa SMS ama emayl si laguu ogeysiiyo maalinta aad ka soo qaadan karto xirmadaada.
Ilaa xaaladani ka dhamaanayso, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad daryeesho naftaada iyo kuwa aad jeceshahay.
Ilaalinta alaabooyinka la keeno gurigaaga
Gelinta xirmooyinka ayaa ku soo rogaya tallaabooyin difaac labadaba adiga qaata xirmada iyo kuwa keenaya ee kuu keenaya labadaba. Waa kuwan tallaabooyinka ay qaadaan kuwa xambaara heer qaran:
Gaarsiinta waxaa lagu fuliyaa mudnaan ahaan sanduuqyada warqadaha la isku dheellitiray markay suurtagal tahay.
Haddii xirmadu aysan galin sanduuqa boostada, qofka keena wuxuu ka digayaa imaatinkiisa isagoo garaacaya albaabka ama garaacaya gambaleelka,
Qofka wax keenayaa wuxuu baakadka dul dhigayaa albaabka agtiisa isla markiiba wuxuu ka tagayaa masaafada ugu yar ee 1 mitir albaabka ka hor inta uusan macaamilka albaabka furin
Qofka alaabta keenayaa wuxuu si fog u hubinayaa in baakadka la helay oo uusan soo qaadan saxiixa gacanta lagu qoray.
Waxaan kuugu mahadnaqaynaa inaad ixtiraamayso tilmaamahan carqaladda ah ee ka fogaanaya xiriir iyo gacan-ku-qaadid gacan-ka-qaad ah oo u dhexeeya adiga iyo qofka wax keenaya. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan tilmaamahan xidhiidhkan (Wasaaradda Dhaqaalaha).